Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo: Warraaqsa Jijjiirama Bu’uuraa Dorrobe Gatachiisuuf Duula Godhamu Callisnee Hin Ilaallu – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa Adda Bilisummaa Oromoo: Warraaqsa Jijjiirama Bu’uuraa Dorrobe Gatachiisuuf Duula Godhamu Callisnee Hin Ilaallu
Warraaqsa bara 1974 Impaayera Itoophiyaa raasee sirna Nugusummaatti xumura godheef sababootnii fi humnootni adda addaa jiraatanis kan akka qabsoo diddaa gabrummaa Saba Oromootti qooda ol’aanaa qabaate hin turre. Diddaan ummatni Oromoo Raayyaa, Daawwee fi Baalee keessatti hidhannoodhaan mootummaa Hailasillaasee dura dhaabbachuudhaan agarsiise kanaaf ragaa dha.
Waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi Sochii Afran Qalloo hundeessuu dabalatee sochiin qabsaawotni ilmaan Saba Oromoo sirna mooticha Hailasillaasee irratti qabsaawuudhaan mirga Saba isaanii kabajsiisuuf taasisanis ragaa biroo ti.
Finciloota sirna qubattootaa irratti qotee bulaa Oromoo Arsii, Salaalee fi bakkoota adda addaatti geggeeffaman, Dhaadannoon “Lafti kan Qotee bulaa haa tahuu!” jedhu ummta keessa faca’uu dabalatee qabsoo bifoota kanaan (hidhannoo fi hidhannoo malee) ilmaan Oromoo geggeessaa turanii fi wareegama qaqqaalii qabsoo kana keessatti baafamaa tureetu wal irratti kuufamee warraaqsa bara 1974tiif bu’uuraa fi humna jabaa tahe.
Ummatni Oromoo akka waliigalaatti fi Qeerroon Bilisummaa Oromoo addatti kan isaan warraaqsa kana geggeessaa jiran gaaffii fi dhaadannoo Bilisummaa Oromoo dhawwaaqaa Alaabaa mallattoo bilisummaa isaanii taate Alaabaa ABO/Oromoo balaliisaa ti. Dhugaan kun osoo ifatti beekamuu fi ija mootummootaa fi hawaasa Addunyaa duratti mul’achaa jiruu har’as qaanii tokko malee bu’aa wareegama ummata Oromoo fi kan ummatoota cunqurfamoo biroo butachuudhaan fedhii aangoo fi akeeka siyaasaa namootaa fi humnoota murtaawaniitiif oolchuudhaan warraaqsa jijjiirama bu’uuraa dorrobe kana gatachiisuuf yaaliin godhamaa jiru guddaa tahuu argaa jirra. Kunis kanuma bara mootummaa Dargii wajjin haala wal fakkaatuun Alaabaa Itoophiyaa fi dhaadannoo “Tokkummaa Itoophiyummaa” jettu jalatti dahatanii gaaffii haqaa kan bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa ummata Oromoo fi ummatoota cunqurfamoo biroo ukkaamsuuf yaaluudhaan of mul’isaa
jira.Adeemsi akkanaa kan dhaadannoo fi maqaa tokkummaa Itoophiyummaatiin gaaffii mirgaa fi bilisummaa ummatootaa ukkaamsuuf yaaluu kun hatattamaan yoo hin sirranne diigamiinsaa fi badiin inni naannoo kanatti hordofsiisuuf deemu ulfaataa taha. Yeroo ammaatti kan barabaachisu maddi rakkoo maal akka tahee fi furmaata waaraa argamsiisuuf wanneen godhamuu qaban maalfaa akka tahan, akkasumas, qaamotni adeemsa gara furmaata waaraatti taasifamu kana keessatti hirmaachifamuu qaban eenyufaa akka tahan sirriitti addaan baasanii tarkaafiilee gara furmaata waaraa sanatti geessan hojiidhaan lafa irratti fudhachuu eegaluu dha. Waan taheef, haalli siyaasaa Impaayera Itoophiyaa kan wareegamni qaaliin itti baafamee yeroo ammaa jijjiirama bu’uuraa dorrobee jiru kun humnoota akeeka siyaasaa fi saamicha dinagdee kan mataa isaanii galmaan gahachuuf jecha gatachiisuu barbaadaniin akkan hin gatanne taasisuudhaan haala jijjiiramni bu’uuraa fi furmaatni waaraan itti argamu mijeessuuf ummatootni, jaarmayooni, mootummootnii fi qaamotni dhimma kana keessatti qooda qaban hundi hafuura itti gaafatamummaa ol’aanaadhaan gaafatama isaanii akka bahatan Addi Bilisummaa Oromoo gadi jabeessee hubachiisa.
ONN: Waxabajji 25,2018-Lixa Oromiyaa Tongoo
Lixa Oromiyaa Begii bakka addaa Tongoo jedhamutti waraanni EPRDF WBO fakkaatee Uummata Sudaan bakkicha qubatee jiruuf uummata Oromoo rukutuu itti fufee
Mootummaan EPRDF shira isaa itti fufuun ABO shororkeessaa gochuuf uummata Sudaan irraa ba’ee gara Oromiyaa naannoo Tongoo qubatee jiru rukutuuf shira xaxaa jira. Kanaaf WBO’n dhiha Oromiyaa keessa sossohu hojii waraana EPRDF uummata nagaa irratti raawwachuuf jedhu cimsee balaaleffataa, akeeka kana uummanni akka hubatuuf dhaamee jira. Shira kanaan ABO shororkeessaa gochuuf WBO fakkaatee uummata kana rukutuuf hojiitti jira.
Akkasuma uummata Oromoo naannoo Tongoo ammallee ajjeesuu itti fufee waraana dhaabbiin akka jumulaan ajjeesaa jiru gabaafamee jira.
Yakka daangaawwan Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru kana uummanni guutummaan akka dura dhaabbatu Qeerroon dhaama!
ONN: Waxabajji 25,2018-Gabaasa addaa, namoota mana hiraarsaatii bahan ilaalchisee
Mootummaan Wayyaanee/EPRDF namoota mana hiraarsaatii bahaa jiraniif mana jireenyaa laachuufi.
Mootummaan nama nyaataa sirni EPRDF uummata Oromoo waraanaan dadhabee dantaan bituuf hojii jabaarra jira. Haaluma kanaan namoota mana huirarsaatii bahan akkasaan mi’aa jireenyaa arganii qabsoo keessaa of baasuu dandaa’anitti maallaqaaf wantoota bubuutuu dhuunfaatti itti darbatee afaan cuqqaaluu irratti hojiitti jira.
Akka icciitiin isaan keessaa bahaa jirutti mana jireenyaa namoota mana hiraarsaatii bahaniif laanna jechuun hojiitti jiru. Akeeki mana jireenyaa namaaf laachuu humna qabsoo afaan qabsiisanii tasgabbii argachuuf kan yaadanii jiran ta’uu Qeerroo Bilisummaa gabaase.
Qeerroo Bilisummaa Oromoo yakka jallataa Mootummaan fudhataa turee itti jiru addatti yakkamaa wal badhaasee nageenya walii eeguuf carraqu kan mormuuf hojii isaan hojjechuuf jedhan kanatti qabsaa’onni mana hiraarsaa irraa bahaa jirtan qooda fudhachuun kaayyoo keessan ganuu ta’uu isin hubachiisa. Addunyaa kanarratti yakki guddaan kaayyoo ofii ganuudha. Kaayyoo ofii ganuun sammuun arrabsamaa jiraachuu akka fidu beektanii qooda akka irraa hinfudhanne qabsaa’otasaaf Qeerroon dhaama. Qaama ofiiyyuu badaa jiruuf qabeenya uummataaf ta’uuf jiruuf qabsoo finiinsinaan Bilisummaa bitamee hinargamnetti adeemaa jiraachuu hubachuudhaan qabsoo keessan kaleessaa akka jajjabeessitan isinii dhaama!
Uummata ajjeefamee, dhiigee, lafee caccabee mana hiraarsaatii isin baaseef qabsaa’uu itti fufaa!